Ebumnuche 5 maka ndị ahịa B2B iji tinye Bots Na Usoro Mgbasa Ozi Digital Ha | Martech Zone
Internetntanetị na-akọwa bots ka ọ bụrụ ngwa ngwanrọ na-arụ ọrụ akpaghị aka maka ụlọ ọrụ na ịntanetị.
Bots anọwo gburugburu ruo oge ụfọdụ ugbu a, ma si na ihe mbụ ha dịbu. A na-arụ ọrụ bọọlụ ugbu a ịrụ ọtụtụ ọrụ maka ọrụ dị iche iche. N'agbanyeghị ma anyị maara mgbanwe ma ọ bụ na ọ bụghị, bots bụ akụkụ dị mkpa nke ahia mix ugbu a.
Bots na-enye ngwọta dị mkpa maka ụdị ndị na-achọ igbutu ụgwọ ma melite arụmọrụ. Mgbe ị bido azụmahịa na ntanetị ma banye na ahia dijitalụ, ị nwere ike ịkwụsị n'emeghị ọtụtụ ihe na mgbasa ozi, nkwalite, ire na nzaghachi karịa ka ị kwesịrị. Bots dị oke ọnụ ala ịtọlite ​​ma nwee ike ịhazi ya n'ụzọ dị mfe.
N'ihi mma ha na njedebe ha, bots ahịa bụ ụdị ewu ewu akpaaka maka ndị ahịa taa. Bots bụ isi ihe egwuregwu ụmụaka gị nke nwere ike ịhazi iji rụọ ọrụ ọ bụla ịchọrọ n'aka ha.
E mebiri njehie mmadụ ma rụọ ọrụ dị irè n'oge elekere na-ekwe nkwa site na iji bot.
Are na-achọ ụzọ iji rụọ ọrụ mgbasa ozi ahịa dijitalụ gị ma belata njehie?
Enwere uru sitere na uru ndị bot nwere ike inye?
Ọ bụrụ ee, mgbe ahụ ị nọ n’aka nri.
N'isiokwu a anyị lere anya n'ụzọ ndị B2B ndị ahịa nwere ike isi soro iji tinye botị n'ime atụmatụ ahịa dijitalụ ha.
Gụọ site na edemede a ma chọpụta modus operandi gị maka ọdịnihu dị mma ma dịkwa ọnụ ahịa.
Reason 1: Use Bots as a Tool to Communicating with Visitors
Nke a bụ otu n'ime ihe ndekọ ederede na bot kacha ewu ewu iji họrọ. Usoro a nwere ike iwepụ nnukwu ọrụ na aka gị ma kwadebe gị maka elele ndị ga-abịara gị.
Ahịa ahịa agbanweela ụzọ ụdị ndị ahịa si akpọtụrụ ndị ahịa na nke mbụ ya.
Nkwurịta okwu ihu na ihu abụghị ụkpụrụ ọzọ, azụmaahịa na-esetịpụ echiche mbụ ha n'ịntanetị site n'echiche weebụsaịtị ha na site na ọdịnaya dị na ya.
Mgbe ndị ahịa buru ụzọ bịa na ebe nrụọrụ weebụ gị, ọ bụghị naanị na ha chọrọ ezigbo eserese na ọmarịcha mma, mana ha chọkwara ozi niile dị mkpa enyere ha.
Na nkenke, ha ga-achọ azịza maka ngwaahịa na ọrụ ị na-enye, yana nkọwa nke ego ma ọ bụ nkwalite ọ bụla dị mkpa. Enweghi ike inye ha azịza ndị a pụtara na ị nwere ike tufuo onye ahịa.
Na-enyere mmadụ niile aka ndị ahịa nwere ike bụ ihe kacha mkpa nke nwere ike isiri gị ike ijikwa ma jikwaa mgbe ịnwere obere ahịa ma ọ bụ ndị otu na-akwado ya.
Ọzọkwa, ndị otu gị ga-ahọrọ oge ọrụ, mgbe nke a gasịrị ndị ahịa agaghị enwe onye ọ bụla dị ịza ajụjụ ha.
Ikenye ndị ọrụ gị ọrụ n’oge ọrụ dị iche iche ga - apụta na ị ga - belata ndị ọrụ ha na - arụ n’otu oge.
Nke a ga - egbochi arụmọrụ ọfụma ọ ga - enye gị enweghị ike ijikwa ndị ahịa na - achọ ịjụ ajụjụ.
O nwere ike ịbụ ihe ijuanya nye ọtụtụ ndị ahịa n'oge a, mana ndị ahịa na-enwe ekele maka nkata ndụ na-aza ajụjụ ha.
Nnyocha e mere n'oge na-adịbeghị anya nke Econsultancy chọpụtara na ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 60 percent ndị mmadụ na-ahọrọ nkata ndụ na weebụsaịtị.
Cannwere ike ịga n'ihu na-ezipụ ozi site na bot iji rụọ ọrụ na nzaghachi.
Jụọ ajụjụ ma mepee azịza nke kwekọrọ na njirimara na njirimara ngwaahịa gị.
O yikarịrị ka ndị mmadụ na-emekọrịta ihe na bot na-adịghị anabata ha. Nwere ike ịme ka bot gị karịa ịnakwere site na ịnye ya foto profaịlụ na ngosi ngosi.
Ihe mgbakwunye ndị a ga-eme ka nkwukọrịta dị n'etiti bot gị na ndị ahịa gị ka mma site na ime ka mmekọrịta gị na mmekọrịta ka mma.
N'ikwu okwu banyere mmekọrịta, Sephora's chatbot bụ ezigbo ihe atụ nke bot nke na-emekọrịta ihe nke ọma na ndị ahịa. Da nke bot na-eji na-ekere òkè na ọ na-enyere ndị ahịa akara akara ha.
Reason 2: Use Bots to Sift Site Your Leads
Iduzi ndi ndu bu oru di omimi maka ndi oru na ndi otu ahia. Usoro dum gbadoro ụkwụ na amamihe gị.
Dịka onye otu ndị ahịa gị, ị ga-ahụrịrị na ị kpọrọ oku ziri ezi banyere nke na-eduga n'ịchụso ịnọgidesi ike karị, na nke ị ga-ada.
Site n'iji nkata nkata, ịnwere ike ịgbakwunye ọtụtụ okwu ịkpa oku na oku ndị a. Mmetụta nwere ike gosipụta na ọ dị njọ, mana nchịkọta nyocha nke boti nkata na-eme iji tozuo ụzọ na-adịkarị ụcha
Cheedị onye ahịa ọhụrụ na-abịa na ebe nrụọrụ weebụ gị n'ịntanetị. Fọdụ nwere ike ịzụ ahịa windo, ndị ọzọ nwere ike inwe ezigbo mmasị.
Na-eburu n'uche ihe dị mkpa na omume nke ndị ahịa gị, ị nwere ike ịhazi ndepụta nke ajụjụ na-atọ ụtọ iji chọpụta ma onye ahịa gị ọ dị n'ime ụlọ nkwonkwo ahịa ma ọ bụ ọ bụghị.
Azịza nye ajụjụ ndị a ga-enyere gị aka ikpebi ndu ndị ị kwesịrị ịchụso.
Enwere bọọlụ etinyegoro nke na-arụrụ gị ọrụ a. Ndị a bots na-enyere aka ịkwadebe ajụjụ wee nyochaa azịza enyere ha iji chọpụta ma enwere ike ịdu ndu ma ọ bụ na ọ bụghị. Driftbot site n'ike n'ike bụ na-eduga nhọrọ ebe a ma ọ bụrụ na ị na-achọ ụdị software.
Ọ bụ ezie na bots nwere ike ịrụ ezigbo ọrụ na iru eru ma na-azụlite ndu, ụzọ kachasị mma iji jikwaa usoro a bụ ịgbakwunye mmetụ mmadụ na njedebe nke nkwekọrịta ahụ.
Bestzọ kachasị mma iji gaa n'ihu bụ ịhapụ bots iji zụlite ma tozuo ụzọ wee nwee ụzọ mmadụ mgbe azụmahịa ahụ na-achọ imechi.
Usoro a nwere ike ịkọwapụta kọwaa usoro ịre ahịa dijitalụ gị maka oge na-abịa. Ọ dị mfe ma na-aghọrọ gị ụgwọ ọrụ.
Reason 3: Jiri Bots dị ka ụzọ iji hazie ahụmịhe Onye ọrụ
Nnyocha e mere na nso nso a achọpụtawo na 71 percent nke ndị ahịa niile na-ahọrọ atụmatụ azụmaahịa ahaziri iche.
N'ezie, ndị ahịa na-adị ndụ ma na-anwụ maka ịhazigharị onwe, ebe ọ na-etinye ha ìhè. Ruo ọtụtụ afọ, ụdị na-ere ihe ha hụrụ maka ọdịmma ha, agbanyeghị ebili mmiri agbanweela ugbu a ma oge eruola ka ndị ahịa chọpụta ihe rere ha ma zigara ha.
Na-eburu n'uche ihe onye ahịa na-eme ka ọ bụrụ onye ọ bụla, ị ga-ewere ya n'onwe gị iji nye ha nlebara anya ahụ. Site n'iji bots, ị nwere ike inye azịza nke ndị ahịa maka ndị ọbịa gị.
CNN bụ ihe atụ nke ọwa ozi akụkọ kachasị elu na-eziga ndepụta ozi ahaziri iche nye ndị ọrụ dị iche iche dabere na ọdịmma ha na nhọrọ ha.
Nke a na - emepụta oghere dị mma ma na - enyere ndị ahịa aka ịdabere na onye na - eweta ozi ọma maka akụkọ niile metụtara ha.
Nhazi bu uzo mbu nke AI nke n’enye aka na ndi otu ulo, ndi ahia na ndi ozo n’aza azịza ha.
The chatbot n'okpuru Structure na-akpọ aha Aisa Holmes ma na-eme dị ka a ahịa gị n'ụlọnga. Aisa Holmes na-achọpụta ndị ahịa ma na-aza ajụjụ ha na ụda olu.
Reason 4: Use Bots for Irè Social Media Nkwurịta Okwu
I nwekwara ike iji bọọlụ na mgbasa ozi gị iji zaghachi ma soro ndị ahịa na-emekọrịta ihe na otu ntinye na nhazi dịka ị ga-eme na weebụsaịtị gị.
Enwere ọtụtụ nkata dị iji mee ka ozi izi ozi gị na Slack na Facebook Messenger. A na-eji bọọlụ mgbasa ozi ọha na eze eme ihe maka ọgbọ ndu, ha na-arụkwa ọrụ ahụ nke ọma.
Reason 5: Use Bots as a Means to D ekpebi Demographics
Bots na-enye ụzọ dị mma iji nyere gị aka ị nweta ụdị igwe achọrọ n'aka ndị ahịa gị, na-enweghị agwa ha ka ha jupụta ụdị dị ogologo na-agwụ ike.
The bot na - emekọrịta ihe na ndị ahịa gị n’ụzọ dị oke egwu ma na - ewepụta ozi dị mkpa maka igwe mmadụ ha.
A na-ejizi ozi a iji nye ahaziri ire azum nye ndị ahịa. Usoro ndị a na-ere nwere ike ịbụ ụzọ dị mma iji weta ndị ahịa ọhụrụ maka akara gị.
A chatbot na-enye nchekwa maka ọtụtụ ndị ahịa ebe ha nwere ike ịkekọrịta ozi metụtara ha demographics, na-enweghị obi erughị ala banyere ya.
I nwekwara ike iji ohere a weta ndị ahịa ọhụrụ ma nweta data metụtara omume igwe mmadụ sitere na ndị ochie.
Ka ọ dị ugbu a, anyị na-atụ anya ka ị ghọta mkpa nkata na otu ị ga - esi tinye ha n'ime usoro ahịa gị. Digital ahịa bụ ihe niile banyere ịbụ nkịtị na-akpụ nkekọ na gị ahịa.
Ntanetị nkata na-enye gị ohere ahụ, ebe ha na-enye gị ohere ịchọpụta mbara igwe nke gaara agara gị nke ọma.
Ndị otu azụmaahịa nwere ike ịrụ ọrụ aka na bots iji mepụta atụmatụ ahịa dijitalụ dị egwu.
Mkparịta ụka na ọrụ 24 nke bots ga-arụ ọrụ nke ọma na nka nke ndị ọrụ mmadụ gị. Site na ngwakọta a, ị ga-enweta ụgwọ ọrụ nke ohere ịre ahịa ka ukwuu na ahịa akpaaka.
Are na-achọ ịnwale ọdịmma gị na itinye botị n'ime usoro ahịa gị?
Ọ bụrụ ee, biko kwue n'okpuru ebe a ka anyị mara etu usoro anyị ga - esi nyere gị aka na njem na - abịa.
Tags: b2bbotsnkata nkataedu ọgbọedu ndúiru erutozuo ndu
Alex bụ Digital Marketing Manager na Pụrụ ịdabere na Microsoft, ụlọ ọrụ na-ere ahịa dijitalụ na-enye SEO na ọrụ ahịa dijitalụ kemgbe 2002.
Afọ Gated: Ọnụ Yourzọ tomá Gị Maka Ezi B2B Na-eduga!
Wzọ 4 Ngwa igwe na-eme ka mgbasa ozi mgbasa ozi mmekọrịta